JUNE&MAY: January 2013
ဆယ်တန်းအောင်ပြီးစ ၁၉၉၆ တုန်းက ကျောင်းတွေကလဲ ပိတ်ထား၊ တက္ကသိုယ် တတ်ဖို့ စောင့်နေတုန်းဆဲ
ကာလဖြစ်တော့ အိမ်မှာ ကိုယ်က ဟင်းချက်တဲ့ တာဝန်ယူရတယ်။အမေက တစ်လ ဈေးဖိုး ဘယ်လောက်
ဆိုပီး ပေးတာပေါ့။ပေးတဲ့ ဈေးဖိုးနဲ့ လောက်အောင် ချက်ရတဲ့ အပြင် အကြိုက်ချင်း ညီမျှအောင်လဲ ချက်ရ
သေးတာပ။အရွက်ကြော်ကို နှုးနေမှ ကြိုက်တဲ့လူ ရှိသလို၊စိမ်းဆတ်ဆတ် မှ ကြိုက်တဲ့လူ ၇ှိတယ်။ငါးစား
တဲ့သူ ရှိသလို မကြိုက်တဲ့ သူလဲ၇ှိပြန်ရော။အဲ့တော့ ဈေးသွားရင် ဈေးကို ၂ ပတ်၊၃ ပတ် ပတ်၊ချာချာလည်
အောင်ပတ်ရတယ်။နီးနီးနားနား အိမ်နားက ဈေးပဲ သွားတယ်။ဈေးကလူတွေကလဲ ကိုယ့်ကို သိနေ၊ကိုယ်
ကလဲ သူတို့ကို သိနေတော့ အလေးတို့၊ဈေးနှုန်းတို့ဆိုတာ အထူးပြောစရာမလိုဘူး။
၂၀၀၀ ခုနှစ်မှာ ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်တော့ ကျောင်းတတ်နေတဲ့ အချိန်ကျတော့လည်း အဆောင်နေတော့
ချက်စားတယ်။အဲ့ကျတော့လည်း ဈေးသွားရတာပါပဲ ဒီတစ်ခါတော့ ကိုယ့်တစ်ယောက်စာ ဆိုတော့ ကိုယ့်
အကြိုက် တွေချည်း ချက်ဖြစ်တော့ သိပ်စဉ်းစား စရာမလိုတော့ဘူး။အဆောင်မှာ ကိုယ်နဲ့ကပ်ရက်အခန်းက
သူငယ်ချင်းနဲ့ ပြည်က မြို့သစ်ဈေး လိုက်မိရင်တော့ ခြေတိုရောပဲ။သူက တစ်ဈေးလုံးပတ် ဈေးတွေ စနည်း
နာပီးမှ ဈေးလဲ ချို ပစ္စည်းလဲ ကောင်းဆိုတဲ့ ဆိုင်ကို ရှာပီးဝယ်တာ။သူမလို့ ဈေးသွားမယ်ဆို အဆောင်က
လူကုန် ဈေးမှာတာပဲ ဈေးသက်သာတယ်လေ။ဈေးကို မောနေအောင်ပတ်ပြီးရင် အဲ့ဈေးမှာရောင်းတဲ့
မုန့်လက်ဆောင်း ထန်းလျှက်ရည်နဲ့ ၁၅ ကျပ် လားပေးရတယ်။မောမောနဲ့သောက်တာပဲ။
အိမ်ကလူ ရန်ကုန်မှာ ခဏနေတုန်းက သူနဲ့ ပုဇွန်တောင်ဈေးကို ဈေးဝယ်လိုက်ဖူးတယ်။သူလဲ ဒီဖက်ထိပ်
ကနေ ဟိုဖက်ဈေး အဆုံ ဈေးလိုက်မေးပြီးမှ ဒီဘက် ထိပ်မှာ ပြန်ဝယ်တာမျိုး။ ဒီကိုရောက်တော့ စူပါမား
ကတ်မှာ ဈေးနှုန်းကပ်ထားတာတွေကြည့်ပီး သင့်တော်တာဝယ်လိုက်တာပါပဲ။ဈေးစစ်စရာမလို။အလေး
ပြည့်သလားလဲ ချိန်ကြည့်စရာမလိုပါဘူး။ဒီတစ်ခေါက်မော်ကျွန်းကိုပြန်တော့ အမြဲချက်ကျွေးနေကြ
ယောက္ခမကြီးက ယောင်းမ ကလေးမွေးမှာမလို့ ရန်ကုန်ကိုသွားတော့ ၁၀နှစ်ကြာမှ ကိုယ့်မှာ ဈေးတစ်
ခေါက်ပြန်သွားရတာပေါ့။ဈေးကလဲ ကိုယ် နဂိုသွားနေကျ ဈေး မဟုတ်ဘူး။မြို့ထဲက ဈေးကြီး ဆိုတော့
ယောက္ခမ ကတစ်ရက်လိုက်ပီး ကြက်သား ဆိုရင် ဘယ်ဈေးသည်ကကောင်းတယ်၊အလေးမှန်တယ်။
ငါးဆို မြစ်ငါး ၀ယ်ချင်ရင် တောသယ်လေးတွေ ဆီမှာ ၀ယ် ။အသီးအရွက်ဆို ဘယ်ဆိုင်၊ငါးပိဆိုရင်လည်း
ဘယ်ဆိုင်ပေါ့ လိုက်ပြထားတယ်။အလေး ပြည့်အောင် ဘယ်လို CHECK လုပ်ရတယ်ဆိုတာလဲ သင်ပေး
လိုက်တယ်။လိုက်ဝယ်ကြည့်တော့ ရောင်းတဲ့လူတွေက အလေး၂မျိုး ရှိကြသကိုး။ကိုယ်လို မအူမလည်လေး
တွေဆို မပြည့်တဲ့ အလေးထည့် လိုက်ကော။ခေတ်စကားနဲ့ ဆို ဂျင်းတဲ့လိုက်တယ်ပေါ့။
မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက် ဘာချက်ရမလဲ စဉ်းစားရတာပေါ့။ကိုယ်ကတော့ ငါးပဲ အာရုံရ
တယ်။ကလေးတွေအတွက် အိမ်ကြက် ချက်ဖြစ်တာများတယ်။ဈေးမသွားကြာတော့ အူလည်လည် ဘယ်
လောက်ဖိုးဝယ်ရင် ဘယ်လောက်ရမှန်းမသိ။ငရုတ်သီးစိမ်းဆို ၅၀ ဖိုးဝယ်ရမလား၊၁၀၀ဖိုးဝယ်ရမလားမသိ။
ဈေးထဲရောက်ပြန်တော့ စလုံးမှာ မရှိတာတွေ တွေ့တော့ အကုန်ဝယ်ချင်ပြန်ရော။ရောဂါ ရောဂါ။
ငါးပိဝယ်ပြန်တော့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ငါးပိထဲမှာ ငါးပိ အမြန် နပ်အောင် ယူရီးယား ဓာတ်မြေသြဇာရော
တယ်ဖတ်ထားမိလို့ အဲဒါနဲ့ မိမှာစိုးလို့ စနည်းနာရသေးတယ်။ငါးပိသည်က နွေ ကတည်းက ထဲ့ထားတဲ့
ငါးပိ အခုမှ ဖော်တာပြောလို့ မယုံတစ်ဝက် ယုံတစ်ဝက်နဲ့ ၀ယ်ခဲ့တယ်။အလေးပြည့်မပြည့်တော့ ပြန်မချိန်
ခဲ့ပါဘူး။ဈေးခြင်းတောင်း တစ်တောင်း ၁ ရက်စာ(လူကြီး၃၊ကလေး၂) ကို ၄၀၀၀ ကနေ ၇၀၀၀ အတွင်း
ကုန်တာပါပဲ... ဘဲဥ ဒီမှာမရှိလို့ ဘဲဥ ၀ယ်စားတယ်။တစ်လုံး၁၀၀။ထောပတ်သီး ဒီလို အလုံးကြီးက ၄၀၀..
ဒါ ဂိုးဒင်းမိုင်း မှာ တစ်စည်း ၇ ကျပ်လောက်ပေးရတဲ့ ကြာရိုး။ဟိုမှာ ၅၀၊၁၀၀ပဲ။
ဟင်းသီးဟင်းရွက် လတ်လတ် ဆတ်ဆတ်။
တို့စရာစုံလင်။အိမ်ကလူက သူ့ဖို့ တို့စရာပဲ ၀ယ်ပါဆိုလို့။
ဈေးခြင်းတောင်း။ယောက္ခမ ဈေးခြင်းတောင်းကို တစ်ပတ်လောက် ကိုယ်စား ကိုင်ခဲ့တယ်။
အပေါ်က ခြင်းတောင်းထဲက ငါးစင်ရိုင်းကို ကင်ပွန်းချဉ်ရွက် နဲ့ ချက်ထားတာ...
အချိုမှုန့်တွေ ဒီလိုရောင်းတာတွေ့တော့ အံ့သြရော...
၁၀နှစ်ကျာ်ကြာမှ ဈေးခြင်းတောင်းတစ်ခေါက် ကိုင်ရတာ ပျော်စရာပါပဲ။
Posted by JuneOne at 11:02 AM9comments Links to this post
ဒီအပတ် မော်ကျွန်းပြန်တာ အမြတ်ထွက်တာကတော့ Edwin တစ်ယောက် မော်ကျွန်းမှာ ပျော်သွားတာပါ။
ဒီမှာ ဘယ်လိုပဲနေနေ အချိန်တန် အရွယ်ရောက်ရင်တော့ ကိုယ့်ဘာသာ၊ကိုယ့်ဓလေ့ ကိုတော့ ရင်းနှီးသွား
အောင် သူ့ကို တစ်ဖြေးဖြေး ကျင့်ယူရမယ်။ဒီမှာနေတဲ့ သယ်ငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ကလေး မော်ကျွန်း
ကို တစ်လကျော်လောက်ပြန်တုန်း ဟိုကမူလတန်းကျောင်းမှာ သူငယ်တန်း ကျောင်းပျော်ထားတာ တွေ့
တော့ ဒီနှစ်ပြန်ရင် Edwin ကို အဲလို ထားရရင်ကောင်းမယ် စဉ်းစားမိတယ်။ဒီမှာကျတော့ ကျောင်းမှာတင်
အင်္ဂလိပ်စာ၊တရုတ်စာတွေ နဲ့ ရှုပ်နေတာ့ မြန်မာစာဖက်ကို သင်ပေးဖို့ကို ကလေးကို သနားတာနဲ့သေချာ
သဘောင်္ပေါ်ကနေ ဇင်ယော်တွေ ကို ပေါင်မုန့်ကျွေးရတာ၊ညဖက် သင်္ဘောပေါ်ကနေ အပြင်ရှုခင်းတွေကို
ကြည့်ရတာ၊မော်တော် ဆိုင်ကယ်စီးရတာ သူတော်တော် ပျော်ပုံပဲ။စွန်လဲလွှတ်ခဲ့တယ်။ရန်ကုန်မှာတုန်း
ကလဲ အာလာဒင်၊မော်တင် ရှော့ပင်းစင်တာ၊Ocean က ကစားကွင်းတွေ တော်တော်များများလဲ လိုက်ပို့ခဲ့
မေကတော့ အသွားတုန်းက သင်္ဘောထဲမှာ ခြင်ကိုက်မှာစိုးလို့ ခြင်ထောင် ထောင်တာ ကြောက်လို့ ဆိုပီး
ခြင်ထောင်ထဲ မ၀င်ဘူး၊ငိုတယ်။ဒီကအသွားလဲ လေယာဉ်ပေါ်မှာ သူ ရှုးပေါက်ချင်လို့ အမေလုပ်သူက
အိမ်သာသွားရင် အဆင်မပြေမှာစိုးလို့ diaper ထဲမှာပေါက်ပါ ဆိုပီး diaper ၀တ်ပေးတာကို။အိမ်ကျမှ
ပေါက်မယ်ဆိုပီး မပေါက်ဘူး ဂျစ်မ။
မြန်မာလေဆိပ်ရောက်တော့ Edwin က မာမား where we going?လို့ မေးလို့ တို့က မြန်မာဆိုတော့
သူက ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊သံဃာ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ လားမားမားတဲ့။သူဆိုလိုတာက
အမေလုပ်သူ သူတို့ကို မျက်နှာသစ်တိုင်း ရွတ်ပေးနေကျ ဂါထာ ရှိတဲ့နေရာလားပေါ့...မော်ကျွန်းပြန်ဖို့
သင်္ဘောဆိပ်အဆင်း ကမ်းနားလမ်းမှာ သစ်တင်တဲ့ ထရပ်ကား အကြီးကြီးတွေ ၄၊၅ စီးရပ်ထားတာ
တွေ့တော့ မာမား why Myanmar havealot of trucks?တဲ့။
ဟိုရောက်တော့ အပေါင်းသင်းများနဲ့လဲ ဆော့တတ်တယ်။တိုးတတ်လာတယ်။
ပြန်လာခါနီးမှာ အထက်လှန်အောက်လျောသဘော မျိုးဖြစ်လို့ ပါရမီ က ဆရာကြီးဦးသိန်းအောင်နဲ့ပြဆိုလို့
ပါရမီပြေးခဲ့ရသေးတယ်။ဦးသိန်းအောင် မစောင့်နိုင်လို့ သူ့လက်ထောက်နဲ့ပဲပြခဲ့တယ်။မြေကြီးနဲ့ထိရတဲ့
ကစားကွင်းဆိုပီး ကရ၀ိတ် ဥယျာဉ် ကစားကွင်းပို့ခဲ့တယ်။
Posted by JuneOne at 3:58 PM3comments Links to this post
မှနျပွညျသဈပါတီနယျမွတေခြို့ ရောဂါကူးစကျမှုကွောငျ့ မဲဆှယျစညျးရုံးခှငျ့ကနျ့သတျထား - မှနျပွညျသဈပါတီ ထိနျးခြုပျနယျမွတှေထေဲက မှနျပွညျနယျ ရေးမွို့နယျ၊ တနင်ျသာရီတိုငျး ရဖွေူမွို့နယျနဲ့ ကရငျ ပွညျနယျ ဘုရားသုံးဆူမွို့တှကေ စုစုပေါငျး ကြေးရှာ ၄၀ ဝ...
KB Skin Treatment Gentle Cleanser (S$19.00) - Skin First MakeUp Second Facial Cleanser Brand: Kathryn Beauty (KB) Price: SGD 19.00 Net: 100ml *Description:* - Moisturizing - Hydrating - Brig...
ရနျကုနျ မုနျ့ဟငျးခါး - ဝကျလကျ ထမငျးပေါငျး - ဝကျသားစဉျးကော ထမငျးထောငျး - ရနျကုနျ မုနျ့ဟငျးခါး (အိုးဘဲဥ) ------------------------------------------- ဒီနေ့ ပိတျရကျမှာ ဝတျရညျ မိသားစုနဲ့ အတူ လုပျစားဖွဈတဲ့ ရနျကုနျမုနျ့ဟငျးခါးပ...
LUX TALK BOTANICALS တိုကျရိုကျ ထုတျလှငျ့မှု အစီအစဉျ မှ မျောဒယျ Jay Baas - LUX Myanmar ရဲ့ “LUX TALK BOTANICALS” တိုကျရိုကျ ထုတျလှငျ့မှု အစီအစဉျ မှာ ပါဝငျခဲ့တဲ့ မျောဒယျ Jay Baas ရဲ့ ပုံရိပျတှပေါ။ By Myanmar Celebrity #LuxBota...
Joe Biden: Finger Rapist and Next US President? - (Staff articles from The FOX NEWS & NEW YORK TIMES in April 2020.)The allegations were leveled earlier this week byawoman named...